Xarunta Dawladda Hoose oo lagu qabtay Munaasabad lagu soo gaba-gabeynayay maalinta Haweenka (SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Xarunta Dawladda Hoose oo lagu qabtay Munaasabad lagu soo gaba-gabeynayay maalinta Haweenka...
Xarunta Dawladda Hoose oo lagu qabtay Munaasabad lagu soo gaba-gabeynayay maalinta Haweenka (SAWIRRO).
8-da Bisha Maarso ee sanad walba Haweenka ku nool aduunyadu waxay soo bandhigaan guullaha ay gaareen iyo caqabadaha la oran karo way hor taagan yihiin.
Munaasabad ballaaran oo soo qaban qaabiyey maamulka Gobolka Benaadir oo ka qeyb galeen masuuliyiin iyo qeybaha bulshada ayaa caawa lagu qabtay xarunta Dawladda Hoose, halkaas oo lagu soo bandhigay waxqabadka iyo aragtida haweenka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Eng. Yarisow oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay maalintan iyo sida ay uga go’an tahay maamulkiisu inuu gacan siiyo dumarka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, waxaa goobta ka hadlay qaar kamid ah masuuliyiinta iyo qeybaha bulshada oo dhammaantood boggaadiyey kaalinta fir-fircoon ee Haweenku ku dhex leeyihiin nolosha aadamaha.
Haweenka Soomaalida oo dhinacooda iyaguna ka xusaya maalinta 8-da Maarso ayaa waxaa iyaga u dheer duruufo adag oo noloshooda soo wajahaya sida dagaallo iyo shaqo la’aan.
Haweenka Soomaalidu waxay waqtiyadii hore iyo xilliganba lafdhabar u yihiin qoysaska Soomaaliyeed. Tiro badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka iyadoo ay taasina u sii dheer tahay daryeelka Ubadka.
Previous articleTaliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo Nairobi kula kulmay dhiggiisa Dowladda Kenya (SAWIRRO).
Next articleMaraykanka oo cunaqabatayn saaray Laba hoggaamiye oo ka tirsan Al-Shabaab